संघीय सरकारको विशेष अनुदानले निमत्यायोे बिबाद
साउन ११, बैतडी(अस) । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा आएको संघीय सरकारको विशेष अनुदानले बैतडीमा विवाद निमत्याएको छ । संघीय सरकारबाट दलित क्षमता अभिबृद्धिको लागि आएको रू.३ करोड नगरपालिकाले प्रस्ताव आह्वान गरी विभिन्न संस्थाहरुलाई रकम बाडफाड गरेको थियो । कार्यक्रम फरफारक भएर रकम भूक्तानी भइसकेपछि...
सुदूरपश्चिमको पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन : लाखौं हिनामिनाको आशंकामा छानबिन शुरू
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन कोरिडोरहरू पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै करीब दुई दर्जन कार्यक्रम बनायो । सो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब ८४ लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन भयो । उक्त बजेटलाई २२ शीर्षकमा व...
११ सय ६५ जनाले लिए स्थायी लेखा नम्बर
नेपालगञ्ज (अस) । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जबाट पछिल्लो १ हप्तामा १ हजार १६५ जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक आवको बजेटबाट ‘एक व्यक्ति, एक लेखा नम्बर’ नीति लिएपछि व्यक्तिगत पान लिनेको संख्या बढेको हो । ‘साउन १ देखि दैनिक करीब २ सय जनाले...
महाकाली नदी छेउका दुई स्थानीय सरकारबीच टकराव : रोयल्टी कसले उठाउने ?
मदन गिरी साउन ९, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाबीच नदीको स्रोत बाँडफाँटको विवाद चुलिदै गएको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि दुई नगरपालिकाबीच रहेको महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनमा टकराव देखिदैं आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महाकाली नदी स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको बाँडफाँटमा कुरा नमिले...
मदन गिरी साउन २, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख ७६ हजार ५११ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयले प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको चालू तथा पूँज...
महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी महेश जोशीले जिल्लामा रोपाइँ अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको दक्षिण भेगमा लगभग रोपाइँ सकिएको छ भने उत्तरी भेगमा रोपाइँ चलिरहेको छ । ज्ञान केन्द्रले स्...
साउन २, धनगढी (अस)। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख भन्सार नाका कैलाली भन्सारबाट विभिन्न वस्तु आयात–निर्यातवापत आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ को जेठ मसान्तसम्म रू. ५ अर्व ३७ करोड ९८५ राजस्व असुली भएको छ । यो असुली ११ महीनाको मात्रै भएको कैलाली भन्सार कार्यालयका सुचना अधिकारी गोपीकृष्ण उप्रेतीले बताए । यो कुल र...
साउन १, धनगढी । कैलाली जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा परीक्षणको रुपमा पानी पठाउन शुरु गरिएको छ । जिल्लाको पूर्वी सीमा कर्णाली नदी छेउको चिसापानीमा निर्माण भएको आयोजनाको मुहान (इन्टेक)का आठ ओटा पानी नियन्त्रण गर्ने ढोकामध्ये तीन ओटा...
भक्तबहादुर शाही नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महीनामा ११ अर्ब २७ करोड २४ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५३ लाख ९८ हजार बढी भएको कार्यालयले बताएको छ । उक्त अवधिमा कार्यालयले ११ अर्ब ९ करोड ७१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थिय...
कञ्चनपुरमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शुरु
असार ३१, महेन्द्रनगर(अस) । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम कञ्चनपुरमा पनि शुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले बुधवारवाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्य शुरु गरेको हो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बैद्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम शुरु गरिएको बताए । उनका अनुस...